tricot ထိုးပြီး fusible interlining ရောင်းချ
35% polyester, 65% ထဲမှာပါတဲ့က) PA50D16-23: အတိုင် 50D, ဖောက် 16 တိုက်လေယာဉ်, သိပ်သည်းဆ: 23 ခ) PA40D16-26: အတိုင် 40D, ဖောက်: 16 တိုက်လေယာဉ်, သိပ်သည်းဆအခြေစိုက်စခန်းအထည် 1) ရေးစပ်သီကုံး interlining အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြအတိုင်ဇာထိုး fusible : 26 ဂ) PA40D16-34: အတိုင် 40D, ဖောက်: 16 တိုက်လေယာဉ်, သိပ်သည်းဆ: 34 2) အခြေစိုက်စခန်းအထည် Grammage: တစ်) PA50D16-23: 60gsm ခ) PA40D16-26: 70gsm ဂ) PA40D16-34: များ၏ 90gsm 3) ရေးစပ်သီကုံးမှု အပေါ်ယံပိုင်း: အပေါ်ယံပိုင်း၏ PA ဆိုပြီး4100% coating အမှုန့်အစက်) Grammage: 15gsm ဖျူးအခြေအနေများ: 1) အပူချိန်: 145-160 2) ဖိအား: 1.5-2.0kg / စင်တီမီတာ? 3) အချိန်: ထုပ်ပိုး 15-18 စက္ကန့်: 150cm အကျယ်, 100MT / လိပ်
နှစ်ဆ dot interlining ရောင်းချ
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြအသေးစိတျကုနျပစ်စညျးဖျေါပွခကျြအင်္ဂါရပ်များ: 1) J3107B, 150cm width ကို 100% polyester 100D x150D3+ 1 အခြေစိုက်စခန်းအထည်, သိပ်သည်းဆ: x ကို 30 ရက် 62, နှစ်ဆ dot အပေါ်ယံပိုင်း CP40 PA ဆိုပြီးအမှုန့် 2) စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 85gsm 3) Fusing ခွအေနအေ: အပူချိန် 125 - 140C 4) ဖိအား: 1.5 - 2.0gsm 5) အချိန်: 15 - 18 စက္ကန့်ထုပ်ပိုး: 100MT / လိပ်
ရိုးရိုး Weave Stretch Interlining ရောင်းချ
(အမျိုးသမီး suite Interlining အတွက်) အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြကုနျပစ်စညျးဖျေါပွခကျြကုနျပစ်စညျးဖျေါပွခကျြ SY2050 စီးရီး 1. ဒါဟာပျော့နဲ့အလင်း handfeeling ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်နှင့်အဖောက်ဦးတည် 2. အချို့သောလမ်းပိုင်း။ 3. ပါးလွှာပိတ်ထည်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သောနှစ်ဆ DOT အပေါ်ယံပိုင်း, ချမှတ်။ 4. ကောင်းမွန်သောနှောင်ကြိုးခွန်အားကိုဆေးကြောခြင်းသို့မဟုတ်အခြောက်အသန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြအင်္ဂါရပ်များ: 1) မော်ဒယ်အမည်: SY2020-PA ဆိုပြီး (20DX20D), SY3030-PA ဆိုပြီး (30DX30D), SY5050-PA ဆိုပြီး (50DX50D) 2) အကြောင်းအရာ: 100% polyester လမ်းပိုင်းကြိုး 3) coated: PA ဆိုပြီးနှစ်ဆ DOT 4) အလေးချိန်: 22-45GSM 5) အကျယ်: 122/125 / 150cm 6) အခွအေနေ fusing အကြံပြု: 120-150 oc / 10-15့/ 2-4 ဘား 7) ကုသမှု Care: 40 ဒီဂရီရေချိုးနိုင်သောသို့မဟုတ်အခြောက်အသန့်ရှင်းရေး Pack: polybag အတွက် 100 / လိပ် (ယောက်ျားရဲ့ suite Interlining အတွက်) ရက်အိတ် SY7510 စီးရီးအတွက်,3လိပ် / Bale Features: 1) မော်ဒယ်အမည်: SY7575-PA ဆိုပြီး (75 * 75D); SY7510-PA ဆိုပြီး (100 * 75D); SY1010-PA ဆိုပြီး (100 * 100D); SY1030-PA ဆိုပြီး (100 * 300D) ။ 2) အကြောင်းအရာ: 100% polyester လွင်ပြင်ရက်ထည်။ 3) coated: နှစ်ချက် DOT ကော် coated ။ 4) အလေးချိန်: SY7575-PA ဆိုပြီး (53-59GSM); SY7510-PA ဆိုပြီး (77-79GSM); SY1010-PA ဆိုပြီး (75-79GSM); SY1030-PA ဆိုပြီး (94-95GSM) ။ 5) အကျယ်: 125 / 150cm 6) အခွအေနေ fusing အကြံပြု: 120-150 oc / 10-15့/ 2-4 ဘား 7) interlining ဒီစီးရီးရေနှင့်ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသည်။ ရက်လေးအိတ်၌ 100 / polybag အတွက်လိပ်,3လိပ် / Bale
ယက် interlining ရောင်းချ
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ 1) နှစ်ချက် Dot Interlining; Dot Interlining paste; အမှုန့် Dot Interlining; ကြဲဖြန့် Powder Interlining; Thermofusible လွှဲပြောင်း Interlining; စသည်တို့ကို 2) ယက် Interlining (စက် Interlining interlining ဆံပင်: တက်တင်းထိုးခြင်း interlining, ဝါ့ပ်သိုးမွှေးထိုး Interlining); Nonwoven Interlining စသည်တို့ကို 3) အရောငျ: White, အနက်ရောင်, Gray, ရေတပ်အပြာစသည်တို့ကို 4) ပူအရည်ပျော်ကော်: PA ဆိုပြီး, PES, စတင်, LDPE, နဲ့ Eva, EVAL စသည်တို့ကို 5) အကျယ်: 90cm, 100cm, 112cm, 122cm, 150cm စသည်တို့ကို 6) ရေးစပ်သီကုံး: ဝါ, Viscon, Fiber, Rayon, polyester စသည်တို့ကို EXP ။ 1) Z291, 150cm width ကို 100% polyester, အတိုင်ဇာထိုး, 30Dx50D အခြေစိုက်စခန်းအထည်, သိပ်သည်းဆ: 35x48 နှစ်ချက် dot အပေါ်ယံပိုင်း CP90 PA ဆိုပြီးအမှုန့်, စုစုပေါင်းအလေးချိန် 40gsm 2) Fusing ခွအေနအေ: အပူချိန် 125-140 3) ဖိအား: 1.5-2.0kg / cm2 4) အချိန်: 15-18sec
Non-ရက် interlining ရောင်းချ
အသေးစိတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ 1) နှစ်ချက် Dot Interlining; Dot Interlining paste; အမှုန့် Dot Interlining; ကြဲဖြန့် Powder Interlining; Thermofusible လွှဲပြောင်း Interlining; စသည်တို့ကို 2) ယက် Interlining (စက် Interlining interlining ဆံပင်: တက်တင်းထိုးခြင်း interlining, ဝါ့ပ်သိုးမွှေးထိုး Interlining); Nonwoven Interlining စသည်တို့ကို 3) အရောငျ: White, အနက်ရောင်, Gray, ရေတပ်အပြာစသည်တို့ကို 4) ပူအရည်ပျော်ကော်: PA ဆိုပြီး, PES, စတင်, LDPE, နဲ့ Eva, EVAL စသည်တို့ကို 5) အကျယ်: 90cm, 100cm, 112cm, 122cm, 150cm စသည်တို့ကို 6) ရေးစပ်သီကုံး: ဝါ, Viscon, Fiber, Rayon, polyester စသည်တို့ကို
ခါး fusible interlining ရောင်းချ
ရှပ်အင်္ကျီ interlining ရောင်းချ
ကြှနျုပျ၏ကုမ်ပဏီတရုတ်အတွက် Kingsaf အုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်း 20 များအတွက် Fusible Interlining ထုတ်လုပ်ခဲ့လေပြီတကား ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အမှတ်ပူ-အရည်ပျော်လွှဲပြောင်း Etc.I ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပါလိမ့်မယ်သေချာ you.I'm နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်ဖို့လိုပါတယ်, အမှုန့်, Fusible Interlining, ပြော့ဖအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်!